Nwoke ndi nwoke bu nwoke ndi nwoke? Ihe ndabere sayensi: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 March 2020	• 15 Comments
isi mmalite: cnn.com
Ke ibuotikọ site na NRC taa Ọ bịara doo anya na ọ kachasị ndị nwoke na ndị okenye nwụrụ site na coronavirus. Ntughari site na edemede ahụ: ENsogbu buru ibu na Covid-19 bụ oke ikuku a na-akpọ cytokine, nke nwere ike ime mgbe ọnyụnyụ malitere ịrịa. Ọ bụ mmeghachi omume siri ike nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ megide nnukwu nje, nke na-akpachaghị anya na-emebi ahụ ahụ. "A na-achịkwa mmeghachi omume nke usoro ahụ maka ọrịa ọrịa site na mkpụrụ ndụ ihe nketa na X chromosome."
N’isiokwu dị n’okpuru a, m ga - achọ igosi gị ihe kpatara o ji dị ka ebe a ọzọ, e buru amụma ebe a na saịtị.
In ihe ederede na aha 'N'ime 'teta' ọhụrụ (nwoke na-eteta), nwoke ọcha na nwoke ahụ nwere ikike kemgbe ogologo oge ', Akọwara m etu ọgụ si wakpo nwoke na-edina ụdị onwe ya. Ebe e si nweta ihe e kwuru n'isiokwu ahụ: “.Ọ bụrụ na onye ọcha nwanyị achịala ụwa nke a ogologo oge, enwere ike ịgwọ ya."
N'ịchọta ihe ndị ae kwuru n'elu site na NRC, n'ụzọ dị ịtụnanya, coronavirus ahụ yikwara inwe mmasị na ya ebe a. Ọ nwere ike ịbụ na anyị na-alụ ọgụ maka ngwa agha ebe nje ebe a ka emechara? A nje imewe? O nwere ike doo anya na ndị agadi ahụ nwere ike ịkarị ọrịa nje na agbanyeghị, mana NRC ederede gosipụtara n'ụzọ doro anya na nwoke ahụ enweghị ọghọm. Gini mere m ji kwuo banyere nwoke na nwoke?
Nke ahụ dị mma. Maka ndị mbido, ịmara na ụmụ nwanyị nwere chromosome XX na ụmụ nwoke nwere chromosome XY. Ma edemede NRC kwuru: "A na-achịkwa mmeghachi omume nke usoro ahụ maka ọrịa ọrịa site na mkpụrụ ndụ ihe nketa na X chromosome." Yabụ ụmụ nwanyị na-aza azịza ya kachasị dị ka echiche a si dị. E kwuwerị, ha nwere chromosome X ugboro abụọ. Lesmụ nwoke nwere chromosome XY na yabụ ọ nwere chromosome X ugboro abụọ. Dabere na ebumnuche NRC, ha nwere ọkara ohere iji wulite usoro nchekwa ihe okike. NRC na-abịa na eserese dị n'okpuru nke na-egosi na eserese a nke ọma. (Nọgide na-agụ n'okpuru eserese a)
Kedu ihe kpatara m ji chee na coronavirus kachasị amasị nke ahụ nwoke na nwanyi nwoke ka o nwere? Ọ dị mma, n'ọtụtụ akụkọ dị ebe a na weebụsaịtị M kọwara na ọ mara kemgbe ngwụcha afọ XNUMX na nnabata ihe ọkụ (IVF) sochiri ihe ịtụnanya a na-akpọ 'chimeric sakamako'. A na-akpọ 'mmetụta chimeric' ahụ mgbe agafe ụdị anụmanụ abụọ, ebe ị nwere ntakịrị. Site na otu nyocha site na 1998 Mkpụrụ ndụ nke IVF na - egosi ohere dịka nwa ebu n’afọ nwere ohere dị 33%. Y’oburu n’uche (tinye ụma) tinye akwa gị n’ime akpanwa, ị mepụtara otu ọgbọ nke ‘’ androgynous ’’ anụmanụ, na-enweghị nke a na-ahụ anya mgbe niile n’ụdị anụ ahụ nke hermaphrodite.
Akọwara m ụkpụrụ ahụ n'ụzọ zuru ezu isiokwu a. M kọwakwara otu esi etolite ọgwụ mgbochi na sel nke nwa ebu n'afọ (anụmanụ ma ọ bụ nke mmadụ). Sel sel ndị ahụ nwekwara chromosom. Na isiokwu a Akọwaara m otu esi abanye izu iri abụọ na abụọ yikwara ka ọ na-ekere òkè na nke a. Ọ bụrụ na i were nwa XY chromosome (nwata nwoke) site na ọgwụ mgbochi toro na sel nke nwa agbọghọ (XX chromosome), mmetụta chimeric ahụ yikwara ka ọ ga-emebi emebi. Dịka ọmụmaatụ, echere m na ọ dị ka gọọmentị ekepụtala ọgbọ nke chimera ruo ọtụtụ afọ site na iji usoro abụọ ahụ edepụtara.
Lucifa / Baphomet ebe chimeric androgynous sitere: wikipedia.org
Okwu ozo maka 'chimera' bu 'androgynous'. N'ime akụkọ ndị a kpọtụrụ aha, akọwaara m ya na ambigu a na-ebilite n'ihi na ụmụaka ndị a nwere ma XX na XY chromosome. Yabụ na ha nwere ntakịrị ihe abụọ. Oge ụfọdụ nwatakiri dị otu a yiri nwa nwoke, mgbe ụfọdụ dịka nwata nwanyị, mgbe ụfọdụ ha nwere ike nwee mkpụrụ ndụ abụọ na yabụ XX / XY chimera pụtara n'ọtụtụ ọdịiche. Recognize matara ihe ọbụla dị na nke ahụ site na mkpọbiri okwu LGBTI? You nwere ike iwulite ‘nwoke anụ ahụ’, ma ị nwere ike ịmalite inwe mmụọ nke nwanyị wee wee daba na ụmụ nwoke. Nchikota niile ga - ekwe omume, mgbe ufodu, ino 'n’agbata ’ma obu inwe obi abụọ (Queer).
Yabụ mgbe m mere nchọpụta a, m dere otu isiokwu na aha 'Nnukwu ntụgharị: Martin Vrijland bụ maka ndị LGBTI! ' Na mberede ọ bịara doo m anya ihe kpatara ụmụaka n ’ụlọ akwụkwọ praịmarị taa ji mụta na ha ka nwere ike ịhọrọ okike ha. E kwuwerị, imirikiti ụmụaka ndị a nwere ma XX na XY chromosome ma bụrụkwa Xime XX / XY. Ha dị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, 'nnọpụiche nwoke na nwanyị'. Aghọtara m na mberede ebe nkwaghari gaa ụlọ mposi na-anọpụ iche na okwu nwoke na nwanyị si? An nwere ihe dị n’azụ a?
Ọ dị mma, ọ bụrụ na anyị laghachi na ebumnuche NRC, obere oge, enwere otu ọzọ nke yiri ka ọ gafee kpamkpam, ndị ahụ bụ ụmụaka ahụ. Yabụ enwere otu ọgbụgba na nke a. E kwuwerị, ọ bụrụ na ụmụaka nke chimera ụdị ya na XX na XY chromosome anọwo na-arụ ọrụ ọtụtụ iri afọ, ha ga-enwe chromosome X ugboro atọ na ahụ ha. Ha na - eme (dịka usoro NRC si dị) ọtụtụ ọgwụ mgbochi megide nje a ma ọ fọdụ nke ukwuu.
Eureka! Ndi coronavirus bu ngwa agha eji eme ihe iji nye iwu nke World Luciferian ' Ndi coronavirus bu bioweapon maka oke ogbugbu nke nwoke na nwoke na nwoke na nwanyi ndi okenye? Anyi na-ahụ nje virus nke Luciferian m kọwara n’akwụkwọ m? Na eserese na-ekwuchitere onwe ya. Ka ọ bụ ọrụ ebumnuche dị ọtụtụ dị ka nke dị n'elu, gbakwunye nrụpụta akụ na ụba na ọchịchị, gụnyere mkpochapu ego? Ma ọ bụ na ọ bụ naanị n'oge mberede egwu dị egwu? Gwa m .. Gụ amụma banyere akwụkwọ ahụ.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: nrc.nl, nejm.org
Nwere ọgwụ nje na ọgwụ nje (IVF) na-eduga n'ọgbọ nke ụmụaka ụmụaka nwoke na nwanyị?
Nnukwu mgbanwe ahụ: Martin Vrijland kwụchitere maka mpaghara LGBTI!
Kedu ihe nọ n’ime ule izu 22 wee nwee ike ịgbanwe okike nwa?
Usoro ịgba ọgwụ mgbochi mba: "nweta ule 22-izu!" .. nwa gị ga-eme hermaphrodite
Mgbasa echiche maka nhụsịrị nke ndebanye aha ụmụ nwanyị
Tags: 63%, chimeric, chimeras, chromosome, coronavirus, Covid-19, agba, nwoke na nwanyi iche iche, IVF, obere nwa, ụmụ, LHBTI, oke, ndị ikom, nwa agbọghọ, percent, ogwu, ọgwụ, ihe choro, tumadi, nwanyi, ndị inyom, X, XX, XY
27 March 2020 na 00: 00
Ihe ngosi ozo:
Iwepụ OZI! Nchoputa ohuru nke ndi Sayensi China deputara Coronavirus Ikike Render Ugba Ndi Mazi Infertile
Isi mmalite: Thailand Medical News Feb 16, 2020 1 ọnwa gara aga
Nnyocha Coronavirus ọhụrụ sitere na ndị ọkà mmụta sayensị ọgwụ na Nanjing Medical University na Suzhou Hospital nke Dr Jianqing Wang, onye isi nke Ngalaba Urology, na Hospitallọ Ọgwụ Suzhou na-ekwu na ụmụ nwoke ụfọdụ ndị ọrịa SARS-Cov2 coronavirus na-akpata ọrịa Covid-19 nwere ike yie. ghọọ ụmụ na-enweghị isi ọ bụrụgodị na ha gbakere site na ọrịa ahụ.
27 March 2020 na 00: 01
Iegha ụgha chee ihu na…
Akwa uwa Luciferian? N’ịchụ àjà, ihu ahụ ga-agbadata.
27 March 2020 na 00: 03
Isi echiche a nile, ọ bịara site n'ịgụ akwụkwọ site n'Akwụkwọ Nsọ na ịhụba etu ndị mmadụ si efe ofufe na-efe Chineke. Abraham bu onye n’efe iru uju, Moses, David, Aaron, Ezikiel, Daniel - nke ahuru otutu. Na-ele nnwogha nke Jizọs, a tụdịrị ndị na-eso ụzọ ya. Get ga akwụkwọ akwụkwọ Mkpughe na enwere nnukwu ife ofufe na ihu.
29 March 2020 na 09: 48
Ọnọdụ a na-adịkarị mfe nwere ebumpụta ụwa. Mgbanwe gas na ngụgụ na-arụ ọrụ nke ọma karịa n'ọnọdụ ahụ. A na-eji ọnọdụ a ọtụtụ mgbe karịa na ndị ọrịa na-abịa ICU nwere nnukwu akụkụ iku ume.
Ọ dị mma ugbu a na enwere ike iwepụta ihe nkịtị ka ihe pụrụ iche. Ndị mmadụ na-aza mmụọ ihe ndị dị otú ahụ na-enwe mmetụta dị ike.
27 March 2020 na 10: 15
Yabụ ọ bụrụ na m ghọtara nke ọma enwere nje mberede na mberede, nke jọrọ njọ (SELF-GROWN IN SECRET) nke na - ebute “infertility mberede” na ụmụ nwoke kwụ ọtọ.
Ya mere, ha nwere ike tụọ aka na nje? , na ịta ya ụta na nje, ihe a na-adịghị ahụ anya. Ha ga-akwọkwa aka ha dị ọcha
27 March 2020 na 19: 20
Ọrịa opia ndị Spen na 1918/19 (ọ bụrụ na ị ga - ekwenye na akụkọ ndị ahụ) yiri ka ha bụ ndị pụrụ iche n'echiche na ọtụtụ ụmụ nwoke dị n'agbata afọ 20 na 25 dabara na ya.
27 March 2020 na 10: 07
Ọrụ maka ndi IMB:
"Ọ bụrụ Vrijland dị nso na ọkụ, ọ gaghị aza ma ọ ga - aga n'ihu na isiokwu ndị ọzọ"…
E kwuwerị, ọ bụrụ na ọ nweghị onye na-elebara ya anya, ọ ga-ajụ oyi ... ma ọ bụ na-agbagha ikpe nke ụwa a nke ndị agha n'ịntanetị kedia?
Nke ahụ na-arụpụta nsonaazụ nke: Ọ bụrụ na enweghị usoro mgbasa ozi ma ọ bụ "usoro mgbasa ozi ọzọ" na-ede banyere ya, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ ihe ngosipụta nke Freeland ahụ.
“Bestzọ kachasị mma iji chịkwaa oppoisition bụ iduzi ya n'onwe gị” na ịgakwa kọchaa onye ọ bụla na-anaghị anabata ebe a na-egwu egwu .. N'ezie General Alex Jones na-eduzi ozi agha ..
27 March 2020 na 12: 45
Ndị ahụ adabaghị na agbanyeghị, n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye na-achịkwa onwe gị. You na-eme nke ukwuu. Site na ịga karịa nke ọ bụla. Will gaghị ahụ ihe ị na-ede ebe ọ bụla ọzọ.
28 March 2020 na 09: 58
You nwere ike iji IMB érs (inoffizieller na GDR) na NSBérs (n'oge Agha Secondwa nke Abụọ)
Ndị ahụ bụ ụdị ndị aghụghọ kachasị njọ ebe nne na nna anyị
kuziere anyi ịkwụwa aka ọtọ na iguzosi ike n'ihe.
Lee nke a bụ mpempe TVlọ Akwụkwọ TV mara mma
Knowma onye Mayor bụ ugbua Obodo / Obodo gị, akọwawara etu esi abụ onye isi obodo
27 March 2020 na 10: 59
Ọ dabara nke ọma, De Telegraaf na-agụ ebe a…
Onye ọrịa na-eto eto anwụọla kemgbe. Ọ bụrụ eziokwu, nke ahụ jọgburu onwe ya, n'ezie, mana ọ bụrụ na ọ bụ nwatakịrị a na-egbochi, amụghị ya site na IVF (gụọ: enweghị XX / XY chimera), ọ ka nwere ike. Ọzọkwa, ọnụnọ nke X chromosome abụghị nkwa ọ bụla, dịka ị nwere ike ịhụ site na eserese na mpempe NRC. X chromosome ahụ na-eme, mana, ogwe aka megide nje ahụ Y adịghị eme ... N'ezie ọ na-anọgide na-eyi egwu, ọnwụ niile ahụ gosipụtara anyị site na mgbasa ozi.
27 March 2020 na 11: 03
PS Gụọ akwụkwọ ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọgwụ a ga-achọta n'ịntanetị wee hụ ma ọ bụrụ na ịhụ okwu 'chimera' ma ọ bụ 'chimeric' na-apụta ebe… okwu ahụ pụtara n'ezie ..
29 March 2020 na 00: 14
Ha nwere ike gụtụ ntakịrị ebe a na akwụkwọ akụkọ ahụ nke dere na '40 / '45 maka ọchịchị aka ike na-atụghị anya ya. Ugbu a na mberede nwa bụ spool ... ọbụlagodi nke ahụ na-egosi isi okwu nke edemede ahụ. Ọ bụrụ n’ị gụọ ya nke ọma, nwa ahụ abụghị onye spool ma ọlị, mana imirikiti ndị mmadụ na-agụ aha…
Nke ahụ ọ ga - emebi echiche Vrijland? Mba, nke ahụ na-egosi isi okwu. Nwa nke a nke XX / XY chimeric ga anaghi enwe mgbaaka obula. E kwuwerị, ọ nwere 3x nke X chromosome.
Niile ụmụ ọhụrụ nọ na Netherlands enweela ikiri ụkwụ (chromosome ma eleghị anya)? Ọtụtụ ụmụ nwanyị agafewokwa izu 22 dị egwu (kromosome ma eleghị anya?) Ọtụtụ ụmụ aka bụ ụmụ IVF.
27 March 2020 na 11: 04
Frank Holland dere, sị:
28 March 2020 na 09: 25
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ anyị,
Na-enyo enyo na Hr Vrijland abatala n'ụzọ ziri ezi na nyocha ya niile, lee ebe a na het Parool
mkpịsị odeakwụkwọ nke onye nta akụkọ, etu o siri zọọ oke n'ụdị na ọ bụ ọnụọgụgụ na ndị nwoke kwụ ọtọ nwere ike bụrụ ndị nje coivid 19 merụrụ ahụ karịa ndị ọzọ. Sayensị na-achọpụta ihe niile. Onweko, n’ezie, odighi n’okwu a.
28 March 2020 na 12: 23
Anyị na-agakwa n’ihu, ugbu a kwukwara ibu. Nwere ike inwe mmetụta ụfọdụ. Mana enwere n’ime ebumnuche ọzọ ebumnuche. Kwuo mkpụrụ nkewa. Dabara adaba na oke foto a na America. Ya mere Corona na-adịwanye ize ndụ.
" Onye isi obodo threattali na-eyi egwu iziga ọkụ na-ere ọkụ iji buso coronavirus ọgụ
Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1? »
Nleta nile: 1.246.368
Martin Vrijland op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
MX op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
Gịnị mere i ji chọọ ịmata nke a? op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, omimi miri emi na mechiri ịntanetị na Eprel 1?
ellysa op 'Bill Gates' countum dots 'kaadị ID nke na-eme ka a mara ma ị nwere coronavirus ma ma ọ̀ gbara gị ọgwụ
2 igwefoto op Trump, Q-Anon na 'nhicha akụkọ ifo dị omimi' (Robert Jensen, Janet Ossebaard)